Imagareeshinka Cusub ee Garoonka Cadaado oo Maanta Xariga Laga Jaray “SAWIRRO” | Radio Muqdisho
Imagareeshinka Cusub ee Garoonka Cadaado oo Maanta Xariga Laga Jaray “SAWIRRO”
Published on September 3, 2013 by Cilmi Waare · No Comments · 5,279 views
Munaasabadda xariga looga jarayay Imagareeshinka cusub ee uu yeelanayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado ayaa waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiin ka mid ah dawlad goboleedka Ximan iyo Xeeb, ganacsato iyo qaybo ka mid ah ururada bulshada.
Imagareeshinka oo ay hirgalisay shirkadda leh garoonka diyaaradaha ee walaalaha ayaa waxaa xariga ka jaray madaxwayne ku xigeenka dawlad goboleedka Ximan iyo Xeeb Kornel Cabdi Maxamed Suldaan.
Axmed Warsame Qeyliye oo xubin ka ah shirkadda walaalaha ee Imagareeshinka hirgalisay ayaa ka waramay taariikhdii uu soo maray garoonka cadaado iyo Imagareeshinkan cusub ee maanta xariga laga jaray.
Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Cadaado ayaa soo dhaweeyay hirgalinta Imagareeshinka cusub, iyagoo sheegay inay qeyb weyn ka qaadan karto koboca dhaqaalaha iyo maalgashiga deegaanka.
Ugu dambeyntii madaxweyne ku xigeenka Ximan iyo Xeeb Kornel Cabdi Maxamed Suldaan oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in muddo badan lagu taamayay in garoonka diyaaradaha Cadaado laga dhigo mid heer caalami ah maantana la rumeeyay riyadaasi.
Imagareeshinkan cusub ee Airport-ka magaalada Cadaado ayaa ka kooban qeybo kala duwan oo loogu adeegayo dadka ka soo degaya ama ka duulaya garoonka, waxaana hirgalintiisu ay ku soo aaday waqti duulimaadyada garoonka ay kordheen.
Sawir Qaade:Maxamuud Cabdi Diirshe,Cadaado